Une Ngirozi Inokuchengeta Here?
Jesu akamboti: “Chenjerai kuti hamuzvidzi mumwe wevaduku ava [vadzidzi vaKristu]; nokuti ndinokuudzai kuti ngirozi dzavo dziri kudenga dzinogara dzichiona chiso chaBaba vangu vari kudenga.” (Mateu 18:10) Saka aireva here kuti mumwe nemumwe ane ngirozi yake inomuchengeta? Bhaibheri haridzidzisi izvozvo. Zvaaireva ndezvekuti ngirozi dzinoda chaizvo mumwe nemumwe wevadzidzi vake. Saka vashumiri vaMwari havaiti zvinhu zvinogona kuvakuvadzisa vachiti ngirozi dzichavadzivirira.
Saka zvinoreva here kuti ngirozi hadzibatsiri vanhu? Aiwa. (Pisarema 91:11) Vamwe vanhu vanoti zvimwe zvinhu zvakaitika muupenyu hwavo kwaitova kupindira kwaMwari achishandisa ngirozi. Ndiwo mafungirowo ana Kenneth ambotaurwa munyaya iri pekutanga. Hatingamurambiri nekuti zvinogona kuitika. Zvapupu zvaJehovha zvinogara zvichiona kupindira kunoita ngirozi pabasa ravanoita rekuparidza. Sezvo tisingakwanisi kuona ngirozi, hatinyatsoziva kuti Mwari anodzishandisa kubatsira vanhu kusvika papi. Asi chatinoziva ndechekuti, hapana chakaipa nekutenda Wemasimbaose kana tikaona sekuti ndiye atibatsira.​—VaKorose 3:15; Jakobho 1:17, 18.
Tumirawo vamwe Tumirawo vamwe Une Ngirozi Inokuchengeta Here?